ခရစ်ယာန်ဘာသာကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာသူဦးလောကနာထ အပြည့်အစုံကိုပုံနိုပ်၍ဖတ်ပါ – Myanmar Latest News
ခရစ်ယာန်ဘာသာကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာသူဦးလောကနာထ အပြည့်အစုံကိုပုံနိုပ်၍ဖတ်ပါ
သူ၏အမည်ကား ဆာဗာတိုရေစီအိုဖီ၊ ဇာတိက အီတလီနိုင်ငံ၊မီလန်မြို့၊အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေထိုင်သည်က အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ကိုလံဗီယာတက္ကသိုလ်မှ ဘီအက်စီဘွဲ့ရ ခေတ်ပညာတတ်တစ်ယောက်
ပင်။တစ်နေ့တွင် ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်အဖြစ် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဓမ္မပဒစာအုပ် တစ်အုပ်လက်ဆောင်လာပေးသည်။ထိုဓမ္မပဒကို ဖတ်ရင်းမှ မည်သူမှတရား မဟောရဘဲ အလိုလို
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်လာသော ဆာဗာတိုရေစီအိုဖီသည် မြန်မာနိုင်ငံကို အမြဲနေရာဌာနအဖြစ်ထားကာ ကမ္ဘာကို သုံးပတ် ပတ်မိသည်အထိ ကြိုးစားပမ်းစား သာသနာပြုတော်မူခဲ့သည်။ထိုကဲ့သို့ ကမ္ဘ္ဘ္ဘာကိုသုံးပတ် ပတ်မိသည်အထိ သာသနာပြုရခြင်းမှာ ဘာသာခြားအဖြစ်နှင့် ကွယ်လွန်သွားသောမိဘနှစ်ပါးသည် ဖြစ်ရာဘဝ၊ဖြစ်ရာဒေသမှ သူ့တရားကိုနာယူကာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်စေချင်သောကြောင့်ဟူပါ၏။မိဘကျေးဇူးအထူးသိတတ်သော အဘိဇာတ-သားထူးသားမြတ်တစ်ယောက်ပါပေ။
တစ်ခါကလည်း ဝမ်းဗိုက်မှာဖြစ်သော အနာရောဂါတစ်ခုကြောင့်ခွဲစိတ်ကုသရန် အီတလီသို့ ခေတ္တပြန်ကြွရသည်။ရောဂါပျောက်၍ပြန်မည်ပြုသောအခါ ဘာသာခြားဖြစ်သော ဦးလေးနှင့်ဆွေမျိုးတစ်စုက သူတို့ဘာသာကို စွန့်ပစ်သည့်အပြင် တခြားဘာသာ၏ရဟန်းအဖြစ်သို့ပင် တက်ရောက်ခြင်းကို မကျေနပ်သဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံများသို့ ပြန်သွားခွင့်မပြုနိုင် အီတလီမှာဘဲနေရမည်ဟု အကျပ်ကိုင်ကြလေသည်။
ထိုအခါ ဦးလောကနာထတစ်ဖြစ်လည်း အီတလီဘုန်းကြီးလေးက ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းအဖြစ်နှင့် သာသနာမပြုရလျှင် သေခြင်းကမှမြတ်သေးသည်ဟု အဓိဌာန်ပြုကာ အစားအစာများလုံးလုံးမစားတော့ခြင်းဖြင့် ဆွေမျိုးများကို အနုနည်းဖြင့် တုံ့ပြန်လိုက်ပါသည်။
လေးငါးရက်ရှိ၍ လူလည်းမျော့မျော့ကျန်သောအခါကျမှ ဆွေမျိုးများလည်း အလျော့ပေးပြီး ပြန်ခွင့်ပေးရပါတော့သည်။ထိုသို့ပြန်ခွင့်ပေးသော်လည်း လမ်းစရိတ်မပေးသဖြင့် အီတလီ၊ပြင်သစ်၊ဆွစ်ဇာလန်၊သြစတြေးလျ၊ယူဂိုစလားဗီးယား၊ဘူလ်ဂေးဗီးရီးယား၊ တူရကီ၊ဆီးရီးယား၊ပါလက်စတိုင်း၊အိန္ဒိယဟူသော နိုင်ငံများကို ရှစ်လကျော်ကြာ ခြေလျင်ဖြတ်သန်း၍ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အရောက်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ဓူတင် ၁၃ ပါးကိုလည်း အမြဲဆောင်ကာ ဘယ်သောအခါမှ ဖိနပ်မစီး ထီးမဆောင်းပါပေ။
အသားငါးကိုလည်း အသက်ထက်ဆုံးရှောင်ကြဉ်၍ သဗ္ဗတ္တကမ္မဌာန်းခေါ် မေတ္တာဘာဝနာကို အထူးတလည်ပွားများတော်မူပါသည်။ဆရာတော်၏ မေတ္တာဦးစီးသော အဆုံးအမကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခဲ့ရသော ဘာသာခြားများမှာ မနည်းလှပေ။
ဗုဒ္ဓဘာသာကို အသက်ထက် တန်ဖိုးထားခဲ့သော အီတလီဘုန်းတော်ကြီး ဦးလောကနာထသည် ဗုဒ္ဓသာသနာ ကမ္ဘာအနှံ့ပြန့်အောင် မနားမနေသာသနာပြုရင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် ပျံလွန်တော်မူခဲ့ပါသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်က ဘုန်းကြီးဟာ ရိုမင်ကက်သလစ် ဘာသာဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ဖြင့် ဗုဒ္ဓသာသနာပြု စိတ်ဓာတ်ထက်သန် ပြင်းပြတဲ့ မြတ်စွာဘုရား သားတော်တစ်ယောက် အနောက်ဘက် ကမ္ဘာတစ်လွှာမှာ သံဃအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြလျက်ရှိသော သာသနာပြုတစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုန်းကြီးဘဝကို ပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့ စာအုပ်ကတော့ ဓမ္မပဒပါပဲ။
ဘုန်းကြီးဆီ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း ဟောပြောဖို့ ဘယ်သူမှ မလာခဲ့ပါဘူး။
ဘုန်းကြီးဘဝကို အကြွင်းမဲ့ ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တာက ဓမ္မပဒစာအုပ်ပါပဲ။
ဒီဓမ္မပဒစာအုပ်ကို မဖတ်မိခဲ့ရင် ဘုန်းကြီးဟာ ယနေ့ထိ ရိုမင်ကက်သလစ် ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ပဲ ရှိနေဦးမှာပါ။
ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓ ဓမ္မပဒစာအုပ်ထဲက ဗုဒ္ဓဟာ ဘုန်းကြီးဘဝကို အကြွင်းမဲ့ ပြောင်းလဲပေးတော်မူနိုင်တဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲ။
အတုမရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဟာ ပရိနိဗ္ဗာန် စံလွန်တော်မူခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း ဗုဒ္ဓရဲ့ ဟောကြားချက် (ဓမ္မ) တွေဟာ ယခုထိ ရှင်သန်လျက်ပဲ ရှိဆဲပါ။
ဘုန်းကြီးဟာ အီတလီမှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး အမေရိကန် နယူးယောက်မြို့မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။
ဝိဇ္ဇာ သိပံ္ပ ပညာရပ်များကို သင်ကြားခဲ့ရပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဓာတုဗေဒပညာရပ်ကို ဦးစားပေးသင်ယူပြီး ဓာတုဗေဘာသာ ဂုဏ်ထူးနဲ့ပဲ ဘီအက်စ်စီဘွဲ့ကို ရခဲ့ပါတယ်။
ဘုန်းကြီးရဲ့ သိပံ္ပပညာဟာ ရှိရင်းစွဲ ရိုမင်ကက်သလစ်အယူနဲ့ ဝိရောဓိ ဖြစ်စပြုလာခဲ့တယ်။
နောက်ချက်ချင်း ဆိုသလိုပဲ သိပံ္ပပညာက အပေါ်စီးရသွားပြီး ရိုမင်ကက်သလစ် ဘာသာက အရေးနိမ့် ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဘုန်းကြီးရဲ့ ဘာသာတရားဟာ သိပ္ပံဘာသာတရား ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
သို့သော်လည်း ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာ စိန့်-ဖရန်စစ်စ်တို့အပေါ် လေးစားချစ်ခင်မြဲ ချစ်ခင်လျက် ရှိနေတုန်းပဲ။
အမေရိကန်မှာပဲ တစ်နေ့တော့ စက်မှုစီမံကိန်းဌာနကြီးတစ်ခုရဲ့ ဓာခွဲခန်းထဲမှာ ဓာခွဲဆရာကြီး တစ်ဦးအနေနှင့် အလုပ်များနေတုန်း မိတ်ဆွေ ဓာတုဗေဒ ဆရာတစ်ယောက် အခန်းထဲ ဝင်လာတယ်။
အလွန် ထုထည်ကြီးတဲ့ စာအုပ်ကြီးတစ်အုပ်ကို ဘုန်းကြီးလက်ထဲ ဓမ္မပဒရယ် အဿဃောသရေးတဲ့ ဂေါတမ ဗုဒ္ဓအကြောင်း ဗုဒ္ဓဝင်ရယ် ပါဝင်တယ်။
အဲဒီစာအုပ်ကြီး ဘုန်းကြီးမိတ်ဆွေ ဓာတုဗေဒဆရာလဲ ဖတ်တယ်။
သူဟာ ခုထိ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် တစ်ယောက်ပဲ။
ဘုန်းကြီးလဲ အဲဒီစာအုပ် ဖတ်တယ်။
ဘုန်းကြီးကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
ဘုန်းကြီးဟာ သိပံ္ပနည်းကျတဲ့ဘာသာ (The Religion of Science) ကို ရှာဖွေနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။
လက်စသတ်တော့ ဘုန်းကြီးရှာနေခဲ့တာဟာ ဒါပဲဖြစ်နေပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ဘုန်းကြီးကြာမြင့်စွာ တောင့်တနေခဲ့တဲ့ ခံစားချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘုန်းကြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး ဖြစ်လာကတည်းက ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေကို အငမ်းမရ ဖတ်ရှု လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
အလွန်ရေဆာ မွတ်သိပ်နေတဲ့ သဲကန္တာရခရီးသည် တစ်ယောက်ဟာ နောက်ဆုံး အလွန် ကြည်လင် အေးမြတဲ့ ကြာရေအိုင်တစ်ခုကို တွေ့မြင်ရတယ်ဆိုရင်ပဲ အငမ်းမရ စိတ်တိုင်းကျ အားရပါးရကြီး သောက်လိုက်ရသလိုပါပဲ။
မြင့်မြတ်လှတဲ့ ဗုဒ္ဓဟာ ဘုန်းကြီးမှာ ရှေးကရှိခဲ့တဲ့ သံသယတွေ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ အားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးလိုက်တယ်။
ဘုန်းကြီးရဲ့ နှလုံးသားဟာ ဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ့ ပြည့်လျှံသွားပါတော့တယ်။
‘လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာ မီးဟုန်းဟုန်း တောက်နေပါကလား’ လို့တောင် ခံစားမှုတွေဖြစ်ရတဲ့ အထိပါပဲ။
ဘုန်းကြီး ကိုယ်တိုင်လဲ မီးလောင်နေတဲ့ အိမ်ကြီးထဲမှာ နေနေရသလို အောက်မေ့မိတယ်။
“အားလုံး မီးတွေလောင်နေတယ်” တဲ့။
“မျက်စိမှာလဲ လောင်နေတယ် နားမှာလဲ လောင်နေတယ် နှာခေါင်း လျှာ ထိတွေ့ရတဲ့ အရာတိုင်းနှင့် စိတ်ကူး စိတ်သန်းတွေအားလုံး မီးဟုန်းဟုန်း တောက်နေပါတယ်” တဲ့။
“ဘာမီးတွေလဲဆိုတော့ လောဘမီး ဒေါသမီး မောဟမီးတွေ အထပ်ထပ် ပဋိသန္ဓေနေရခြင်း အိုရ နာရ သေရခြင်း မီးတွေ ပူပန်ကြောင့်ကြနေရခြင်း (သောက)၊ ငိုကြွေးမြည်တမ်းရခြင်း (ပရိဒေဝ)၊ ကိုယ်ဆင်းရဲ စိတ်ဆင်းရဲ ဖြစ်ရခြင်း (ဒုက္ခ ဒေါမနဿ)၊ ငိုကြွေးရမတတ် စိတ်ပူလောင်ရခြင်း (ဥပါယာသ) မီးတွေ လောင်မြိုက်နေတယ်” တဲ့။
ဗုဒ္ဓစကားတွေကို ဘုန်းကြီး ယုံကြည်တယ်။
ဒါ့ကြောင့် အိမ်က တိတ်တဆိတ် ထွက်လာပြီး အိန္ဒိယသို့ လာတယ်။
နောက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရဟန်းဘောင် တက်ခဲ့ပါတယ်။
အီတလီနိုင်ငံသား ဘုန်းတော်ကြီး ဦးလောကနာထအကြောင်း အတိုချုပ်
ကို ကျွန်ယခင်က တင်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဘုန်းတော်ကြီး ဦးလောကနာထ ဟာ ကမ္ဘာတစ်လွှား
မှာ သက်ရှိသတ္တဝါများ အသက်မသတ်ကြဘဲ သတ်သတ်
လွတ် စားကြဖို့ နဲ့ မေတ္တာတရားထားကြဖို့ တရားတော်
တွေကို လှည့်လည်ဟောကြားခဲ့တဲ့ ထေရဝါဒ သာသနာ
၀င် ဘုရားသားတော်တစ်ပါး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘုန်းတော်ကြီး ဦးလောကနာထ ဟာ ဘာသာပြန်
တချို.က ရက်အကန့်အသတ် ၊ လအကန့်
အသတ်နဲ့ ဘယ် နှစ်ရက်စားပါ့မယ်၊ ဘယ်နှစ်လ
စားပါ့မယ် အစရှိသဖြင့် စာရင်းပေးကြပြီး၊
တစ်ချို.ကတော့ ခြေလေးခြောင်း သတ္တဝါ
ရာသက်ပန် ရှောင်ပါ့မယ်၊ တစ်ချို.ကုန်းသတ္တာ
အစရှိသဖြင့် စာရင်းပေးတာကို မှတ်တမ်း
တင်ထားပြီး အားလုံးက သာဓု ခေါ်ကြပါတယ်–
ကျွန်တော်လည်း အဲဒီအချိန်ကတည်းက ခြေလေး
ဘုန်းတော်ကြီးကို လှူခဲ့ပြီး ယခုတိုင် ရှောင်ကျဉ်
ခဲ့ပါတယ်– အခါလားလျှော်စွာတော့ အသက်သတ်
လွတ်စားပြီး ၊ဥပုပ် သီလ ဆောက်တည်ခဲ့ပါတယ်။
ဘုန်းတော်ကြီး ဦးလောကနာထ ဟာ ဝေဘူ ဆရာ
တော်ဘုရား၊ စွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရား တို့ကိုလည်း
အီတလီ ဘုန်းတော်ကြီး ဦးလောကနာထ ဆရာတော်
ရဲ. ဓါတ်ပုံဟောင်းတစ်ချို.ကို ဖူးမြော်နိုင်ရင် တင်ပေး
သတ်သတ်လွတ် စားကြလို့ မြတ်စွာဘုရားက
မဟောကြားခဲ့သော်လည်း ၊ သူတစ်ပါးအသက်
သတ်မစားကြဖို့တော့ မြတ်စွာဘုရားက ဟောကြား
ထားတာကြောင့် ၊ မဟာစည်ဆရာတော် ဘုရားကြီး
ဟောကြားထားပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း ကျင့်ကြံခဲ့သလို
သတ်သတ်လွတ်စားတာက ပိုပြီးတော့ စိတ်ချရ
ပါဏာတိပါတကံကို အပြည့်အ၀ ဆောက်တည်နိုင်
အီတလီ ဘုန်းတော်ကြီး ဦးလောကနာထ မှ သာသနာရေးအရာရှိ ဦးဟန်ဋ္ဌေးကို ပြောကြားခဲ့သော စကား……….
“ဒကာကြီး ဦးဟန်ဋ္ဌေး ….မြန်မာပြည်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ ဘုရင့်သားကနေ ဘုရင် ဖြစ်လာတာနဲ့တူတယ် ။ နိုင်ငံခြားသား ဘာသာခြားကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတဲ့သူတွေကတော့ ဆင်းရဲသားကနေ ဘုရင်ဖြစ်လာတာနဲ့တူတယ် ။ ဘုရင့်သားတော်ကနေ ဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါ လွယ်ကူလွန်းတော့ ဘုရင် အဖြစ်ကို သိပ်တန်ဖိုး မထားသလို မြန်မာပြည်သားများဟာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖြစ်ကို လွယ်လွယ်ကူကူရတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကို တန်ဖိုး မထားကြဘူး ။ ဒါကြောင့်လည်း ၀မ်းရေး တစ်ခုလောက်အတွက်နဲ့ ဘာသာ ပြောင်းကြတာပေါ့ ။ ဆင်းရဲသားအဖြစ်က ကျားကုတ်ကျားခဲ ကြိုးစားပြီး ဘုရင် ဖြစ်လာတဲ့သူက ဘုရင် အဖြစ်ကို အလွန်တန်ဖိုးထားသလို ကျုပ်တို့လို ဘာသာခြားဘ၀ကနေ အခက်အခဲ များစွာကို ကျော်လွှားပြီးမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာသူတွေကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အလွန်တန်ဖိုးထားတယ် ။ ဘယ်လောက်အထိ တန်ဖိုးထားသလဲဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကို အသက်ထက် တန်ဖိုးထားတယ် ”
Credit to: သမိုင်းကြောင်း
Copy: A Shin Tay Za